ဆိုက်မှာ chat box ထားသင့် မထားသင့်
ဆိုက်မှာ chat box ထားသင့် မထားသင့် >
ဆိုက်မှာ စကားပြောမယ်။ စော်အကြောင်းတွေ မာဆက်အကြောင်းတွေ ဖာဘိတွေ ချောင်းရိုက် ကင်မရာအကြေင်းတွေ အောစာအုပ်အကြောင်းတွေ လိုချင်တဲ့ကားတွေ ဆိုက်တွေ အကောင့်တွေ ပြီးရင် ကြီးဆေးတွေပေါ့။ ချက် ဘောက်လေးလုပ်ပေးရင်ကောင်းမလား ဖြေပေးသွားကြပါ။ vote သွားကြပါ။
ကောင်းတယ် Admin အဲလိုထားရင် မြန်မာကားသစ်တွေလည်းရယ်ထင်တယ် တယောက်နဲ့တယောက် Sharing လုပ်လို့ရမယ် ကောင်းပါတယ်??
Do it Dude. I will Be Super Spammer :>
ကောင်းတယ် ထား နေရာတွေ Share လို့ ရတယ်
chat box ထားတာကောင်းပါတယ် ... ကျနော် ကတော့ acc activation ဖြစ်အောင်2လ စောင့် လိုက်ရတယ်.. ဖြစ်နိုင်ရင် chatbox ကို active မဖြစ်တဲ့ သူတွေပါ chat လို့ ရအောင်လုပ်ပေးတာကောင်းမယ်ထင်တယ်.. ပြီးတော့ အကြံပေးစရာတစ်ခုရှိသေးတယ်
(07-09-2019, 11:43 PM)kyawzin007 Wrote: chat box ထားတာကောင်းပါတယ် ... ကျနော် ကတော့ acc activation ဖြစ်အောင်2လ စောင့် လိုက်ရတယ်.. ဖြစ်နိုင်ရင် chatbox ကို active မဖြစ်တဲ့ သူတွေပါ chat လို့ ရအောင်လုပ်ပေးတာကောင်းမယ်ထင်တယ်.. ပြီးတော့ အကြံပေးစရာတစ်ခုရှိသေးတယ်
ကြိုဆိုပါတယ်။ အမှတ် ၃၀ ပေးလိုက်ပါတယ်။ အကြံပေးပါဦး
activate မဖြစ်သေးတဲ့သူတွေအတွက်ပါ ဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီ။
အကြံပေးချင်တာက 2014 လောက်တုန်းက facebook မှာ dating နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့page တွေgroup တွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ ရတယ်.. ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ အဲ့ ဒီ့ page တွေgroup တွေအသုံးပြုပြီး date ဖူးပါတယ်.. နောက်ပိုင်းကျတော့ တကယ့်real တွေပျောက်ပြီး fake တွေပဲရှိတော့တယ်... အကြံပေးချင်တာက ကျနော်တို့ ကြုံတွေ့အသုံးပြုခဲ့ ရသလို dating နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးစေချင်တယ် website ဒါမှမဟုတ် application တစ်ခုအနေနဲ့ ပေါ့ .... အသုံးပြုသူတွေကိုတော့နိုင်ငံခြားက dating website နဲ့ application တွေလိုပဲ တစ်လကို ဘယ်လောက်6လ ကို ဘယ်လောက် 12 လ ကိုဘယ်လောက်ဆိုတဲ့ နှုန်းတွေကောက်ခံသွားမယ်ဆိုရင် သန့် ရှင်း သပ်ရပ်တဲ့မြန်မာ dating ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုများ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မလားပေါ့....
(07-10-2019, 07:14 PM)kyawzin007 Wrote: အကြံပေးချင်တာက 2014 လောက်တုန်းက facebook မှာ dating နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့page တွေgroup တွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ ရတယ်.. ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ အဲ့ ဒီ့ page တွေgroup တွေအသုံးပြုပြီး date ဖူးပါတယ်.. နောက်ပိုင်းကျတော့ တကယ့်real တွေပျောက်ပြီး fake တွေပဲရှိတော့တယ်... အကြံပေးချင်တာက ကျနော်တို့ ကြုံတွေ့အသုံးပြုခဲ့ ရသလို dating နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးစေချင်တယ် website ဒါမှမဟုတ် application တစ်ခုအနေနဲ့ ပေါ့ .... အသုံးပြုသူတွေကိုတော့နိုင်ငံခြားက dating website နဲ့ application တွေလိုပဲ တစ်လကို ဘယ်လောက်6လ ကို ဘယ်လောက် 12 လ ကိုဘယ်လောက်ဆိုတဲ့ နှုန်းတွေကောက်ခံသွားမယ်ဆိုရင် သန့် ရှင်း သပ်ရပ်တဲ့မြန်မာ dating ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုများ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မလားပေါ့....
ကျွန်တော်တို့ ဝဘ်ဆိုက် ဆောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တကယ်ဝန်ဆောင်မှု့ ပေးနိုင်တဲ့သူတွေရှိရင်တော့ လုပ်ကြမယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် ကူညီပါမယ်။
ဘရို သိဖူးတဲ့ အပြင်မှာ ကျင်လည်တဲ့သူ ရှိရင် အဆင်ပြေတယ်။ သူက စီစဉ်ပေး ကျွန်တော်တို့ဘက်က မန်ဘာတွေအတွက် လုပ်ပေးမယ်။ vip သမားတွေက ဒီအစီအစဉ်ကို ကြိုက်ကြမှာပါ
ဘရိုပြောတဲ့ datingဆိုတာ အပြင်မှာ ဒိတ်ပြီး ချိတ်လို့ရတဲ့ ဇယားဆိုရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
တစ်ခုတော့ ရှိတယ်ဗျ အသစ် ဖန်တီးမယ့်dating နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ web ဟာ (ဇယား(ဖာ)) နဲ့ခေါင်းတွေနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ web တစ်ခုဖြစ်စေချင်တယ် ... ဥပမာ ဒီ web ကို လာသုံးတဲ့သူဟာ silver, gold,အစရှိတဲ့ (pkg) ကို ၀ယ်သုံးရမယ်လို့ ကန့် သတ်လိုက်ရင် သုံးတဲ့ သူ တွေသန့် သွားမယ်... fake နဲ သွားမယ်... ပြီးတော့ ဝါသနာသူတွေလာသုံးကြမယ် တွေ့ကြမယ် date ကြမယ် like (Tinder) app .
သာမန် သမီး၇ည်းစား၇ှာတဲ့ဆိုက်လိုများ ဖြစ်နေမလားဘရို
စော်တွေကလည်း လာချိတ်မှ ဖြစ်မှာ အဲ့ဒါ သိပ်တော့မလွယ်ဘူး
ညမင်းသား site ကိုသတိရတယ်။
အဲ့ခေတ်က ပိုက်ဆံအတွက် မပာုတ်ပဲ ဖျော်ဖြေ ရေးသက်သက်ပဲ
(07-11-2019, 04:57 PM)လလလ Wrote: ညမင်းသား site ကိုသတိရတယ်။
အင်း ဟုတ်တယ်။ အဲ့တုန်းက မန်ဘာတွေက ပို့စ်တွေတင်ကြတယ်။ အခုခတ်ေမှာတော့ တစ်ယောက်မှကို မတင်ကြတော့ဘူး။ ခေတ်ပျက်ကြီးဖြစ်နေပြီ။
အဲ့လိုတင်ကြမယ် ရှယ်ကြမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေမယ်ဗျာ။
Dating တေ သိရရင် ပိုကောင်းမာ
ရန်ကုန်မာ Date လို့ ရမယ့် နေရာတေ သိရင် လင်းပေးကြပါဗျာ အပြန်အလှန်ပေါ့
Forum Jump: Private Messages User Control Panel Who's Online Search Forum Home ElITE VIP -- VIP ELITE SECTION အမုန်းလန်းတဲ့ ရှယ်ကားများ vip forum -- စပါယ်ရှယ်စုစည်းမှု့များ vip room -- ဈေးကြီးရှားပါးအထွေထွေ -- တရားဝင်ဆယ်ကျော်သက် ဇတ်ကားများ Movies -- မြန်မာအောကားများကြည့်ရန်နှိပ်ပါ MyanmarMovies မြန်မာဓာတ်ပုံများ Myanmar Photos -- မြန်မာဓာတ်ပုံများကြည့်ရန်နှိပ်ပါ Myanmar Photos မန်ဘာဝင်မှ ကြည့်လို့ရမယ်။ -- မြန်မာတွေအတွက် သီးသန့် -- ဖိုရမ်နဲ့ပတ်သတ်သမျှ အောစာအုပ်များ -- မြန်မာအောစာအုပ်များ asianscandal -- အာဆီယံပရီမီယမ်ကားတွေ asian scandal